“War joog haku biirin PSG.”. Cristiano Ronaldo oo Neymar siyay TALO ku aadan Mustaqbalkiisa – Gool FM
“War joog haku biirin PSG.”. Cristiano Ronaldo oo Neymar siyay TALO ku aadan Mustaqbalkiisa
Byare July 23, 2017
(China) 23 Luulyo 2017. Cristiano Ronaldo ayaa kula taliyay laacibka u ciyaara kooxda ay cadaawada kala dhexeyso ee Barcelona Neymar inuusan ku biirin PSG.
Xiddiga reer Portugal ayaa la sheegay inuu la xiriiray Neymar si uu ugu sheego inuu galayo qalad wayn haddii uu go’aansado inuu ku biiro kooxda reer France.
Intaa kaddib Ronaldo ayaa la sheegay misane inuu ku booriyay xiddiga reer Brazil inuu u dhaqaaqo Manchester United haddii uu dhab ahaantii doonayo inuu ka tago qalcada Camp Nou.
Neymar iyo CR7 ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir saaxiibtinimo marka laga soo tago xifaaltanka waalan ee ka dhexeeya labadooda kooxood. Waxaana heshiiskooda sii hormariyay inay xayaysiin u wada sameeyaan shirkadda Nike.
Warsidaha Diariogol ee dalka Spain ayaa sheeganaya inay labada laacib ay si dhow u xiriirayeen iyagoo ka munaaqashoonayay arrinka ku aadan heshiiska 195 milyan uu Neymar ugu biirayo PSG.
Wuxuu sheeganayaa warsidaha in Ronaldo uu fariimo dhab ah WhatsApp ugu diray 25-jirka isagoo uga digaya inuu ku biiro camaaliqada reer France.
Wuxuuna intaa u raaciyay haddii uu ku biiro kooxdaasi yar iyo horyaalkaasi hooseeya uu talaabo dib u qaadayo.
Xiddiga 4-ta jeer ku guuleystay Ballon d’Or isla markaana loo badinayo inuu helo tii 5-aad ayaa kaliya aaminsan in Real Madrid iyo Manchester United oo qura ku heer yihiin Barcelona.
CR7 ayaa intaa u raaciyay Neymar haddii ay dhab ahaan ka go’antahay inuu isaga dhaqaajiyo Barca uu sugto inuu ku biiro Old Trafford maxaa yeelay waxay awoodi doonaan inay koryeelaan muuqaalkiisa dhanka caalamka.
Neymar JR ayaa isagu xalay soo bandhigay bandhig aan innaba caadi ahayn kaddib markii uu labo gool oo caaqibo leh ugu shubay Juventus kulan saaxiibtinimo ay uga adkaadeen 2-1.
Benjamin Mendy oo u soo duulay Mareykanka si uu u dhammeystiro ku biiristiisa Man City
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Bayern Munchen vs AC Milan 0-4 (Milan oo Munich si fiican u martay)